रबी लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा प्रहरीको गतिविधिले उब्जाएको आशंका ? - News Bihani
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा छानविनको लागि भन्दै न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रवि लामिछानेसहित तीन जना पक्राउ ।लामिछानेसहित, पत्रकार युवराज कँडेल, र ओखलढुङ्गाकी नर्स अस्मिता कार्कीलाई ५ दिन म्याद थप पनि जिल्ला अदालतले गर्यो । तर घटना हेर्दा लामीछानेसंग पूर्वाग्रही ढंगले दुश्मनी साझं पक्राउ गरेको देखिन्छ ।
पूर्वसहकर्मी सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको कसूरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा उनलाई लिइएको हो । लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुअघि उनका समर्थकले प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पछाडिको गेटबाट अदालतमा उपस्थित गराएको हो । बिहीबार साँझ लामिछाने र कँडेललाई न्यूज २४ टेलिभिजनबाटै गिरफ्तार गरिएको थियो भने कलंकीबाट अस्मिता कार्कीलाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार लामिछानेले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी विषयवस्तु तयार भएको सूचना पाएपछि पक्राउ गरिएको थियो।
तर प्रहरीको गतिविधि भने शंकास्पद रहेको देखिन्छ । शालिकरामको त्यो भिडियो कसरी र कहाँबाट कसले प्राप्त गर्यो ? जबकी उनको मोबाइलसहित भेटिएका सम्पूर्ण श्रोत प्रमाणको लागि प्रहरीसंग छ ,त्यसैले यो भिडियोको स्रोत प्रहरी नै हो, किनकि मृतकको वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन, अनुसन्धान र सरसामग्रीको संकलनकर्ता प्रहरी नै हो । प्रहरीले यस विषयमा मुख खोलेको छैन । पारिवारिक स्रोतबाट भिडियो बाहिरिएको आशंका गरिएको छ, यदि यस्तो हो भने भिडियोको सत्यतथ्य विष्लेषण बिना प्रहरीले परिवार वा अन्यलाई भिडियो किन बाँड्यो, यो रहस्यपूर्ण छ । उक्त भिडियोको सबै प्रकारको टेष्ट नभई रणनीति बनाउनु एक नियोजित प्रकृया हो, यस्तो किन गरियो ? यहाँ शंकाको लागि प्रसस्त मार्ग छन् ।
सार्वजनिक भएको भिडियोमा पुरै अंश देखाउन नसकिने भनिएको छ, यसको अर्थ भिडियो अझ धेरै समयको छ तर भिडियोको ३ मिनेट ४८ सेकेन्डमा इडीट गरि मिलाइएको देख्न सकिन्छ। किन भने उनि बेडमा खाली सो मा भिडियो बनाउदै थिए तर एक्कासी सिरानी कहाँबाट आयो? यो गम्भीर छ ।
सो भिडियोको पुरै अंशको अध्ययन विष्लेषण प्रहरीको थप अनुसन्धान प्रकृया हो। यदि पुडासैनी रविलाई आफ्नो मृत्युको कारण मान्थे र उनलाई घृणा गर्थे भने मर्ने बेलासम्म पनि रविको फोटो आफ्नो फेसबुकमा किन राखिरहेका थिए ? यो गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ।
मृतकले भिडियोमा रविमाथि करोडौंको रकम उठाएको आरोप लगाएका छन् । आफुलाई १८ हजार मात्र दिएको बताएका छन्, यसर्थ भिडियोको मर्म र प्रहरीको आरोप पत्र एकआपसमा मेल नखाने देखिन्छ। उनले संकेत गरेको अकूत सम्पत्तिको छानविनमा प्रहरी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, रविले दुरूत्साहन गरेको भन्ने आरोप अलि बेमेल जस्तै देखियो।
पुडासैनीले भिडियोमा भनेका छन् म माषिक एक लाख देखि एक लाख पचास हजार कमाउथे तर उनि दश हजारमा जागिर खान किन गए ?
उनले भिडियोमार्फत रविले वेलकम एड एजेन्सी मार्फत पैसा खान्छन् भनेका छन् , यअर्थमा एजेन्सीका मालिकलाई पक्राउ गरेर सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्थ्यो, तर प्रहरीले त्यसो गरेन र रविलाई फसाउन खोजेको देखियो।
परिवारले पुडासैनीले आत्महत्या गरेको होइन उनलाई रडले कुटेर मारिएको छ झोला र क्यामेरा हराएको छ भन्दा भन्दै उल्टै प्रहरीले आत्महत्या गरेको भन्दै रबि बिरुद्द मुद्दा हाल्न किन दवाब दियो ?
अस्मितालाई चिनाउने र मृतकलाई कार्यस्थलमा मृतककै भाषामा दुर्व्यवहार गर्ने युवराज हुन् । उनले यी कुरा त्यसअवस्थामा खोलेका छन् कि जुनबेला उनी न्यूज २४ छाडेर त्यो पनि खुशीयालीसहित गइसकेका छन् र अर्को राम्रो अवसर प्राप्त भएको भनी माउन्टेन टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा लिड गरिरहेका छन्। रविलाई भगवान एवं गुरू मान्य, हरेक बखत खुशी र हर्षित हुने र उक्त कार्यको खुलेआम भिडियो वा टेक्स वा इमेज मार्फत सार्वजनिक गर्ने शालिकरामलाई धेरैपछि यसप्रकारका पीडाले किन छोप्यो ?
अस्मिता उनका अत्यन्त निकट र प्रिय साथी थिइन् । तर, पछिल्ला दिनमा उनले बीपीमा जागिर समेत लगाएका थिए तर पछिल्लो व्यवहार, कृयाकलाप र गतिविधि शालिकरामप्रति त्यत्ति प्रेमिल थिएनन्। उनले त्यसको रोष भिडियोमा पोखेका पनि छन्, पटकपटक नाम लिएर आफ्नो फोकस अस्मितालाई बनाएका छन्। भिडियोले भन्छ, केटीले उनलाई धोका दिएको छ , असहम भएर त्याग्नु वा अलग हुनु मृत्यु कारकको दुरूत्साहन हुनसक्छ ? यो त व्यक्तिको अधिकार हो।त्यसमाथि उनि विवाहित थिए त ?
शालिकरामले आफुसंग करोडौ रहेको बताएका छन् जो आफ्नो मात्र भएको बताएका छन्। उनीसंग त्यो कहाँबाट आयो ?
हो यी अनेकौं प्रश्नहरूलाई एकै ठाउँमा केलाउँदा मृतकको परिवारले शंका गरेको हत्या माथि विषयान्तर भएको छ । अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिहरू दुरूत्साहन कसुरमा परेका हुन्, त्यसो हो भने वास्तविक हत्यारा को हुन् ? यो आत्महत्या हो कि हत्या ? उचित जवाफ जनताले खोजेका छन्। प्रहरीप्रति जनताको बढ्दो अविस्वासमा प्रहरीले अब यो घटनाको कसरी छानबिन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।